Android လုလင်: Google service မပါသောဖုန်းများအား google service ထည့်သွင်းနည်း
Android လုလင် Facebook page
Android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးအဖြေများ
Google play ကနေ တိုက်ရိုက်ဒေါင်းမယ်
ငါတတ်ငါတော် ငါအကျော်ဟု၊ ငါသော်စိတ်ထား မရှိငြားလည်း၊ ငါကားငယ်ရွယ် ဥာဏ်မကြွယ်၍၊ အဘယ်သို့လျှင် အမှားစင်အံ့၊ အကြင်သူတော် ပညာကျော်သည်၊ ချွတ်ချော်လွဲမှား ငါ့စကားကို၊ စိတ်ထားဖွေးဖြူ ပြင်တော်မူ။
android လုလင်မှာ ရှာမှာလား
၀ါသနာတူသူငယ်ချင်းများမန်ဘာဝင်ရန် Join this siteကို နိုပ်ပြီးGoogle ကိုရွေးပြီးမိမိ gmail နဲ့ဝင်ပါ
Facebook page မှာ like လုပ်ပြီးကူညီကြပါနော်
Google service မပါသောဖုန်းများအား google service ထည့်သွင်းနည်း
google service မပါတဲ့ ဖုန်းတွေ အကြောင်းအရင်ပြောမယ်ဗျာ။ google service မပါတဲ့ ဖုန်းတွေ ရဲ. ဆိုးကျိုးတွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတော့ G talk သုံးမရခြင်း Gmail သုံးမရခြင်းနှင့် google play ၀င်မရခြင်းစတာတွေက တော့ အထင်ရှားဆုံးပြသနာတွေ ပါပဲ google ကပေးတဲ့ service တွေ ဘာတစ်ခုမှကို သုံးလို.မရပါဘူး အဲ့တာတွေကို ကျော်လွှားဖို.အတွက် system file ထဲမှာ gapps ဆိုတဲဟာလေးကို သွင်းပေးရပါတယ်။အဲ့တာမှ google ကပေးတဲ့ service တွေ အကုန် လုံးကို သုံးလို.ရမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တာသွင်းဖို.အတွက် အရင်ဆုံး မိမိဖုန်းက cwm တင်ထားပီးသားဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။cwm တင်မတင်သိခြင်ရင်တော့ recover mode ထဲကို ၀င်ကြည့်လိုက်ပါ။အဲ့ထဲမှာ install zip-----ဆိုတဲ့ စာသားလေးနဲ.ဟာ ပါရင်တော့ cwm တင်ပီးသားဖြစ်တယ်လို. ယူဆလို. ရပါတယ်။ပီးရင် gapps ဆိုတဲ့ zip ဖိုင်လေးကို ဒေါင်းရပါမယ်မိမိဖုန်းအမျိုးအစားအလိုက်ပေါ့ ရွေဒေါင်းရပါမယ်အောက်ကလင့်မှာ အများကြီးရှိပါတယ် မိမိဖုန်း android version အလိုက်ဒေါင်းပေါ့နော်
ဒေါင်းပီးလို.ရလာတဲ့ gapps ဆိုတဲ့ zip ဖိုင်ကို ဖုန်းရဲ. sd card ထဲကို ထည့်ပါ။ပီးရင်တော့ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပါ။
ပီးရင် volume down+power ကီးကို တွဲနှိပ်ပေးပါ။ အချို.ဖုန်းတွေက တော့ recovery mode ထဲ ၀င်တဲ့ နည်း လွဲပါလိမ့်မယ် ဒါ ကျွန်တော့ ဟာဝေးး ဖုန်းလေးကတော့ အဲ့လိုလုပ်ရင် အိုကေပါတယ် ခင်ဗျ။ပီးရင် install zip------ ဆိုတာလေးကို ရွေးပါ ။ပီးရင် sd card ကိုရွေး။နောက်တဆင့် ခုနက မိမိသိမ်းထားခဲ့တဲ့ gapps ဖိုဒါလေးထဲကို သွားပီး အဲ့တာလေး ကို အင်စတော လုပ်လိုက်ပါ။ ပီးရင် စက်က restart ကြသွားပါမယ် ။ပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာ google service တွေ အကုန်သုံးလို.ရသွားပါပီ။ အဆင်ပြေကြပါစေ။
ရေးတဲ့အချိန် 9:40 PM ရေးသားသူ Android လုလင်
အကြောင်းအရာ သိမှတ်စရာ, ဆော့ဝဲ
Unknown July 4, 2013 at 2:53 PM
recover mode မရှာတတ်လို့ ပါ။ ဖုန်းအမျိုးအစားက Huawei C8813D (CDMA 800 MHZ) ဖြစ်ပါတယ်
ညီမရဲ့ ကိုကို August 13, 2016 at 10:41 AM
ညီမရဲ့ ကိုကို August 13, 2016 at 10:43 AM
Ko Phyoe July 11, 2013 at 12:32 PM
အစ်ကို ကျွန်တော်ဖုန်းက huawei y210c ကို google service ထည့်လိုက်တာ ဖုန်းစဖွင့်ဖွင့်ချင်းမှာ Sorry ဆိုပြီး
The application Google Services Framework has stopped unexpectedly.Plese try again. ဆိုတဲ့ error box တက်လာလို့ ဘယ်လိုလုပ်ရင်ရမလဲသိချင်လို့ပါ။ android version 2.3.6 ပါ Gapps ကို 2.3.5-7 ကိုတင်တာပါ 2.3.4 ကိုလည်းပြောင်းတင်ကြည့်သေးတယ်မရလို့ပါ အစ်ကိုအားတဲ့အချိန်ဖြေပေးပါနော်
kyizaw linn August 10, 2013 at 8:20 PM
c8813 D ရဲ့ recover mode က
ဖုန်းကို ဘက်ထရီဖြုတ် ငါးစက္ကန့်လောက် ပြီးရင်ပြန်တပ်
vol+ နဲ့ power ကို တွဲပြီးနှိပ် ဖိသားထား အလိုလိုပေါ်လာမယ်
kyizaw linn August 10, 2013 at 8:27 PM
ုgoogle service မပါသော ဖုန်းတိုင်းတွင် root ရှိယုံ ဖြင့် cwm မလိုဘဲ google play ထည့်သွင်းနည်း
nay lin September 22, 2013 at 2:04 AM
Laminchit Thawkoko March 25, 2014 at 12:29 PM
အကိုကျေးဇူးပြုပြီး cwm ဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါနော်cwm ကဘာအတွက်လုပ်ဘို့လိုအပ်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲရှင်းပြပေးပါကျေးဇူးတင်လျက်အမြဲအားပေးနေမယ်
Minn Thant January 18, 2015 at 12:00 AM
cwm တရုတ်လိုဖြစ်နေလို့ အင်္ဂလိပ်လိုလေးလိုချင်လို့ပါ ရှိပါသလား
hla soe July 23, 2015 at 12:55 AM
အကိုကျွန်​​တော်​ဖုန်းက g610u00 googleမရဘူး ကူညီ​ပေးပါဘာလုပ်​ရမလည်​လို့
hla soe July 23, 2015 at 12:57 AM
Ucsm Carbon August 4, 2015 at 12:01 PM
cwn ဘယ်လိုတင်ရပါလည်းခင်ဗျာ ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်
Koko King August 10, 2015 at 4:23 PM
အကိုအရင် ကဆော့ထားတဲ့coc ပျက်သွားလား
kyaw swar August 31, 2015 at 11:58 PM
Hlaing Bwar October 6, 2015 at 11:44 PM
အကို အာ့ recover mode ကဘယ်ထဲမှာလဲဗျာ ကျေးဇူးပြုပြီးဖြေပေးပါလားဟင် ကျနော့်ဖုန်းက coolpad 7275 ပါ
kyaw wana mg November 28, 2015 at 11:59 AM
ကျွန်တော့ဟာကcoolpad 7232ပါ zip fileကinstallလုပ်မရဘူးဖြစ်နေတယ်
moe naing htay December 23, 2015 at 10:25 AM
huawei y 320-C00 google play service မရလို့ပါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပြန်ဖြေပေးပါအုံး
ko phyo January 17, 2016 at 7:45 AM
Na Vi December 15, 2016 at 10:28 PM
၀င်ရောက်ဖတ်ရှုပေးကြသော သူငယ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ comment တစ်ခုဟာ နောက်ဘလော့အတွက် အားဆေးတစ်ခွက်ပါ။
ကျွန်တော် လုလင်ပျို နဲ့ ဆက်သွယ်လိုပါက androidlulin@gmail.com
ကော်နတ်ရှင်လေးလံသူများ mediafire ကနေ ဒေါင်းလော့စွဲမယ်ဆို
Android လုလင် apk နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို ပုံပေါ်မှာကလစ်နိုပ်ပြီး ယူပါ။
Android Market store
Android လုလင် အတွက် Market store လေးတစ်ခု လုပ်ထားပါတယ်။ အချိန်မရသေးလို့apk မထုတ်ရသေးပါဘူး။ အဆင်သင့်တော့ မဖြစ်သေးပါဘူး။ အားလုံးကို အသိပေးထားတာပါ။
androidလုလင် ကိုရောက်လာကြတဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ပဏာမအနေနဲ့ဂါရ၀ပြုနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ androidလုလင် ဆိုဒ်မှာရှိတဲ့ ပို့တွေအားလုံးဟာ ကျွန်တော်ရေးထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ androidလုလင် ဆိုသကဲ့သို့ android နဲ့ပတ်သက်တာတွေ အကုန်စုံရအောင်လို့ တွေ့မိသမျှနဲ့ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ပို့များကို တင်ပြထားခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ရိုးသားစွာဝန်ခံပါတယ်။ ပို့ပိုင်ရှင်များ မျက်စိလည်လမ်းမှားပြီးရောက်လာခဲ့သော် အပြစ်တော်မမြင်ပဲ အချစ်တော်ဝင်ပေးကြပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်နော်။ အပြစ်မြင်သူ၊ချစ်ခင်သူ၊ဝေဖန်သူ၊အကြံပြုသူ ကုန်းတိုက်သူ၊ကြင်နာသူ အားလုံးကို ကျွန်တော် လုလင်ပျိုက အမြဲတမ်း လေးစားချစ်ခင်လျက်ပါ။
android ဖုန်းဆိုင်ရာ အမေးနဲ့အဖြေစုံ
Boot animation လုပ်​နည်း
Coolpad Myanmar Font
internet setting ချိန်နည်း
secret codes ကုတ်များ
Auto SMS Sender For Android
Phone Bill မကုန်အောင် အင်တာနက်အသုံးပြုမယ် (Update)...
Call Schedule v3.3.6(အချိန်မှတ်ပြီးAuto ဖုန်းခေါ်ခိ...
English Myanmar Dictionary v2.0.3 For Android OS
Android ဖုန်းကနေ Wireless & Bluetooth စနစ်ပါရှိတဲ့...
ဘယ် HUAWEI ဖုန်းမဆို မြန်မာလိုမြင်ရအောင်လုပ်နည်းလေ...
HUAWEI တွေ Firm ware ရေးနည်းလေးပါ
Android မိုဘိုင်းဖုန်းများအတွက် လျှို့ ဝှက်ကုဒ်မျာ...
Root Browser ကို အသုံးပြုပြီး မြန်မာဖေါင့်ထည့်နည်း...
Facebook ပေါ်မှ ဗီဒီယိုကို ဖုန်းနဲ့ ဒေါင်းယူကြမယ်
ကိုးန၀င်း မိုးလင်းမှ သိသွားအောင်
ဖုန်း ဖြင့် 3G အင်တာနက် သုံး သူများ ဆောင် သင့် တဲ့...
ငွေလက်ကျန် ကြည့်၊ ငွေ ဖြည့် မယ် mSIM
Android ဖုန်း ၀ယ် မယ့် သူများ အ၀ယ်မ မှားရအောင် ဖတ်...
Galaxy S2 Plus I9105 ကို CWM သွင်းမယ် root မယ်
Back key နဲ့ Home key သုံးမရသူများ နှင့် ခလုပ်နာမှ...
GPS ကို အသုံးပြုပီး မိမိ ရောက်ရှိနေသော နေရာအား off...
ALL Huawei Unlock Code Generatorလေးပါ။(offline)
ဖုန်းမှာ ကိုယ့်ပုံကို 3D ဒီဇိုင်းနဲ့ ကိုယ်ပြောချင်...
1500 တန် cdma 800mhz အင်တာနက် ချိန် မရသူ များ အတွ...
Android ဖုန်းတွေမှာ Factory Reset လုပ်လိုက်လို့ Gm...
Huawei T8828 Official Firmware (android လုလင်မှာေ...
Google service မပါသောဖုန်းများအား google service ထ...
Android versions 1.5 မှ 4.2 ထိ Root လုပ်နိုင်တဲ့ S...
FaceBook ပေါ်ကနေ FreeCall ခေါ်မယ်
Tap4Call - free phone calls ...v1.3.4
Android မှာ ကိုယ်ပွားလေးတွေဖန်တီးပေးမယ့် app တစ်ခု...
ကိုကို ညီညီ များအတွက် ရှယ်တကာ့ရှယ် နော် 18+မြန်မာ sexy တဲ့နော် အရမ်းကြမ်းထားပါသည် 18 နှစ်အောက် ညီတော်များမယူရ မြန်မာမိန်းမပျိုလေးများမဒေါင်းရ(ပြောထားတယ်နော် ဒေါင်းရင်ဘာဖစ်...အဲ့)
ကဲ ကိုကို ညီညီတို့ အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးလို့ ဆိုရမှာပဲ ဟီးးးးးးး လုလင်ပျ...
18+Game ယောက်ကျားလေးများသီးသန့် - My Virtual Girlfriend Apk v2.1 +Mod Unlimited Money & Full Unlocked
တင်ပေးလိုက်ပြန်ပါပြီဗျာ 18+ Game ယောက်ကျားလေးများသာသီးသန့်ကစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Game လေး ထဲမှာ မိန်းမလှလေးများနဲ့ အဆင်ပြေပြေ ညှိနှိုင...
IMEIမှာ invalid ဖြစ်သွားတာကိုဖြေရှင်းနည်းလေးပါ.
သူငယ်ချင်းတို့ဖုန်းမှာ.. ကလိတာလွန်ပြီးerrorတက်တာမျိုးတွေရှိမှာပါ... ခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းလေးက.. ကလိတာလွန်ပြီးမိမိတို့ရဲ့ဖုန်း...
ဖုန်း ငွေဖြည့်ကဒ်ကို hack မယ်
ဖုန်းရဲ့ ငွေဖြည့်ကဒ်ကို hack ခြင်းအကြောင်းကို ကိုမင်းစိုးရာဇာ ရဲ့ ဆိုက်ကနေ တွေ့ရှိလို့ ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ ကိုမင်းစိုးရာဇာ ပြောထားတာ...
အိမ်ထောင်ရှင်များ အတွက် ကလေးစောင့်ရှောက်ပုံ App For Android (မြန်မာ make လေးပါ)
ဤအသုံးချပရိုဂရမ်တွင် ကလေးများကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ မိဘများက မိမိကလေးကို ကျန်းမာသော၊ ထက်မြက်သော၊ ဥာဏ်ကောင်းသော၊ လိမ္မာသော၊ ထ...
V ROOT ဗားရှင်း 1.7.5 < V-day တွင်ထွက်ရှိလာသော V ROOT > ( 14.2.2014 )
V-Root ဗားရှင်းအသစ်ပါ...။ Version : V 1.7.5 Date : 14.2.2014 Size : 6.58MB ဒီနေ့မှ update ထွက်တာလေ...
Viber hack ကြရအောင်
2 Ways To Hack Viber မင်္ဂလာ နေ့ လေး တစ် နေ့ ကျရောက် လို့ လာပါ တယ်ခင် ဗျာ in...
အခြေခံမိုဘိုင်းဖုန်းError များနှင့် ဖြေရှင်းနည်းအကျဉ်းချုပ်များ (For Beginner)
အခြေခံမိုဘိုင်းဖုန်းError များနှင့် ဖြေရှင်းနည်းအကျဉ်းချုပ်များ (For Beginner) ပထမဦးဆုံးပြောလိုတာကတော့ မိမိထင်ရာတွေသာရေးထားတာဖြစ်လို့ အ...
Y535-C00 B131 Firmware & တင်နည်း
အသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ ” Huawei ” ” Y535-C00 ” ရဲ့Firmware လေးအသစ်ထွက်ရှ်ိလာတော့ အားလုံးလည်းဒေါင်းချင်မှာပေါ့ဗျာ.. သူ့ တရုတ်ဆိုက်က ဒေါ...
google play က app တွေ game တွေကို ဘာဆော့ဝဲမှမလိုပဲ ဒီစာမျက်နှာမှာပဲ direct link ထုတ်ပြီး ဒေါင်းကြမယ်
ကဲ android လုလင် ချစ်ပရိတ်သတ်တို့ရေ သတင်းကောင်းလေးတစ်ခု ရှယ်ကြီးလာပါပြီနော် google play က app တွေ game တွေကို ဘာဆော့ဝဲမှမလိုပဲ ဒီ page မှ...
adf.ly ကနေ download လုပ်နည်း
** Step-1.အောက်က Download Button ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ** Step-2. "5sec". လောက်စောင့်ပေးပါ။ ** Step-3. " << SKIP AD >> ".ကိုနှိပ်ပေးပါ။ ** Step-4. Download Link ကျလာပါလိမ့်မယ်။ ** အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
သူငယ်ချင်းတို့ရဲ့ ဆိုဒ်မှာ တင်ထားပေးစေချင်ရင် ကုဒ်တွေကူးသွားပြီး ထည့်ထားပေးပါနော်